15583363 | Steem Block | Steem
33 transactions in this block, produced at 2017-09-18 19:59:57 (UTC)
fe4ba1c0 donkeysworld follow cryptowiesiek Sep 18 '17
e6b03d91 urielrosdlr upvote @nestorvp/bogota-turistica-colombia (10%) Sep 18 '17
b185624d leminhead unfollow oninreil Sep 18 '17
eed856ec babelek upvote @rndness222/fractal-of-the-day-170917 (85.55%) Sep 18 '17
48de3a85 dilimunanzar replied to @openparadigm/why-i-don-t-upvote-comments-… Sep 18 '17
d99c5c6c sylviamiller unfollow michellesmile Sep 18 '17
8849bfe5 imjoy replied to @jrcornel/how-many-americans-have-heard-of… Sep 18 '17
e10819e1 esaug replied to @luzcypher/steemit-open-mic-week-51-record… Sep 18 '17
1c2a8195 faruk7499 authoredapost: @faruk7499/i-painted-the-death-star-on-car… Sep 18 '17
931600df reddust replied to @sharoonyasir/re-reddust-happy-one-year-bi… Sep 18 '17
1bca2195 johnnycopper1 upvote @bryngerard/re-johnnycopper1-re-bryngerard-2017914… Sep 18 '17
d3181ec6 ankitchoudhary follow wildtrader Sep 18 '17
f93df1f0 sylviamiller unfollow michellesmr Sep 18 '17
c9c0cfbf carolynstahl authoredapost: @carolynstahl/color-challenge-monday-red Sep 18 '17
e8dec467 minnowpond1 replied to @failsvoter/your-aunt-was-kind-enough-to-m… Sep 18 '17
8a36ca0b nikola.sanic replied to @estarrion/re-nikolasanic-2017918t21554837… Sep 18 '17
01f9e251 aafeng upvote @incrediblesnow/18-9-2017-cn-abuse-report-for-cn-a… Sep 18 '17
20d45ece sylviamiller unfollow michellethorne Sep 18 '17
b27cdefc funaddaa unfollow branislav Sep 18 '17
f5de74f1 tbuyus replied to @vlone99/re-tbuyus-hello-steemit-introduci… Sep 18 '17
97c7e97f svamiva upvote @ninahaskin/steemitphotochallenge-55-entry-futuris… (52%) Sep 18 '17
0f20b352 ankitchoudhary follow williamdeamer Sep 18 '17
2a4d5c2c leminhead unfollow onire Sep 18 '17
4c848b37 sylviamiller unfollow michelletoronto Sep 18 '17
58c53fca nightboy authoredapost: @nightboy/ska-kithundefinedkhyn Sep 18 '17
58c53fca nightboy upvote @nightboy/ska-kithundefinedkhyn Sep 18 '17
8ab47c53 nairo.martinez upvote @daneftaly/lehazmin-invitar (10%) Sep 18 '17
de1bc117 leminhead unfollow onizuka Sep 18 '17
1a77a347 beautylover replied to @anwarmalick/re-beautylover-sara-jean-unde… Sep 18 '17
9302132b leminhead unfollow onlimono Sep 18 '17
cde6bf69 sylviamiller unfollow michelletsz Sep 18 '17
5da75ea1 rea upvote @minnowbooster/minnowbooster-tutorial-5-delegating… (25%) Sep 18 '17
91024fbb ankitchoudhary follow williamk Sep 18 '17
1f092851 nashbeard upvote @paradise-found/color-challenge-red-pepper Sep 18 '17
"Nice post @openparadigm very agree with what your opinion in this post, we should asacommunity mutual upvote & resteem posting fellow, it is very inspiring as what your opinion, I have upvote
"@@ -71,8 +71,131 @@
+%0A%3Ciframe width=%22560%22 height=%22315%22 src=%22https://www.youtube.com/embed/a7ZuAtqpkn8%22 frameborder=%220%22 allowfullscreen%3E%3C/iframe%3E
"I painted the Death Star on cardboard withacredit card"
"@sharoonyasir, I figure it's easier to be honest. Less energy wasted creatingafalse identity .... life isastruggle for all of us, I share my struggles to let other people know they shouldn't give up, struggles are good if carried correctly and put down when done! I'll doaseparate post for my Steemit dolphin, this one is going on my favorite list!"
"Color Challenge Monday Red"
"Quiteafew years ago onacrisp fall day we took some photos ofafamily that were friends of some friends. They were an amazing likeastory book family with perfect real smiles. They smiled from the heart and it showed. My favorite was the little girl who wasadelightful charmer,anatural andavery good person. You can really see the results ofafamily that loves truly.
"thanks, okay done"
ဗန်းမော်ဆရာတော်ဘုရားကြီးသည် မင်းတုန်းမင်းကြီးအား ပုံပြင်တစ်ပုဒ်ပြောလျှက်ဆုံးမတော်မူခဲ့ဖူးပါသည်။
ထိုပုံပြင်လေးသည် ယနေ့ထက်တုိင်ပင် လူ့ဘောင်လောကအတွက် ခေတ်မှီအသုံးဝင်လျှက်ပင် ရှိနေပါသေးသည်။
တောရွာတစ်ရွာတွင် သာဂေါင်ဟုခေါ်တွင်သောအိမ်ထောင်သည်ယောက်ကျား တစ်ဦးသည် အတက်ပညာ
ကောင်းမွန်စွာ မတက်ဘဲနှင့် ဘ၀ကို ဆင်းရဲစွာရုန်းကန်လျှက် မိစားစုအားရှာဖွေကျွေးမွေးလျှက်ရှိလေသည်။
ဇနီးမယားမှာလည်း သူ့လိုပင် များစွာမခြားနားလှချေ။ ဂုဏ်ရည်တူသူချင်းဖြစ်လေသည်။ ဒီလိုနှင့်သားရတနာ
တစ်ယောက်ထွန်းကာလာပြီး များမကြာခင် ပညာသင်ရန်အရွယ်သို့ပင်ရောက်လုပြီဖြစ်သည်။
သားလှရတနာလေးဖြစ်သည်နှင့်အညီ ရှင်ပြုခြင်း မင်္ဂလာကိုလည်း လုပ်ကြရပေဦးမည်။ အလုပ်စီးပွားကလည်း
များစွာမဖြစ်လေသောကြောင့် ဒီအကြောင်းများတွေး မိလေတိုင်း ဇနီးမောင်နှံ နှစ်ဦးသည် အလွန်ပင်
တစ်နေ့တွင် ဇနီးဖြစ်သူက ကိုသာဂေါင်အား တနယ်တကျေးသို့ စီးပွားရှာထွက်ရန်တိုက်တွန်းစေလွှတ်လိုက်
လေသည်။ လမ်းမှာသုံးရန်အတွက် အနှစ်နှစ်အလလက စုဆောင်းသိမ်းဆည်းထားသော မိသားစုပိုင်ငွေအသပြာ
သုံးရာအား ထည့်ပေးလိုက်လေသည်။ ဇနီးဖြစ်သူသည် သားငယ်လေးအား ပြုစုစောင့်ရှောက်ရန်အတွက်
ရွာလေးမှာပင် ကျန်ရစ်ခဲ့လေသည်။ ဒီလိုနှင့် ကိုသာဂေါင်သည် တစ်မြို့ဝင် တစ်မြို့ထွက်ခါ တစ်ဝမ်းတစ်ခါးအတွက်
ကြုံရာကျဘမ်းအလုပ်များ လုပ်ကိုင်ဖြေရှင်းရင်းနှင့် စီးပွားအသပြာရှာလေသည်။အိမ်မှပါလာသော အသပြာသုံးရာအား
တဖြည်းဖြည်းနှင့် အချိန်တွေပြောင်း နှစ်တွေညောင်းခဲ့သော်လည်း အလုပ်စီးပွားမဖြစ်ပါဘဲရှိလေသည်။ ဒီလိုသာ လုပ်နေလျှင်
ဘာမှထူးခြားလာတော့မည်မဟုတ် ပညာတစ်ခုတော့တက်အောင်သင်ပြီး လုပ်မှသာလျှင် အလုပ်စီးပွားဖြစ်ချေမည်ဟုတွေးမိလေသည်။
သို့နှင့် ပညာသင်ကြားရန်အတွက် ဒိသာပါမောက္ခ ဆရာကြီးထံ ရောက်လို့သွားလေသည်။ ရောက်သည်ဆိုလျှင်ပင်
ဆရာကြီးအား သူ့အခက်အခဲနှင့်ဖြစ်ကြောင်းကုန်စင်အား သိစေပြီးလျှင် သူ့အတွက်သင့်တော်မည့် ပညာတစ်ခုသင်ကြား
ပေးရန်အတွက် တောင်းပန်ပြောကြားလေသည်။ ပါလာသော ငွေအသပြာသုံးရာအားပေးအပ် ကန်တော့လေသည်။
ဆရာကြီးလည်း ကိုသာဂေါင်အား သနားဂရုဏာသက်လျှက် ငွေအသပြာသုံးရာနှင့်ညီမျှသော စကားသုံးခွန်းသင်ပေးလိုက်လေသည်။
(၁) ကုလားသေကုလားမော မအိပ်နှင့်
ဟူ၍ဖြစ်လေသည်။ ကိုသာဂေါင်လည်း ထိုစကားသုံးခွန်းအား အလွတ်ကျက်မှတ်အာဂုံဆောင်လျှက် မိမိရပ်ရွာသို့ပြန်လေသည်။
အပြန်ခရီးလမ်းတစ်နေရာတွင် နေ၀င်မိုးချုပ်သွားသဖြင့် အသင့်တွေ့သော ဇရပ်အိုတစ်လုံးပေါ်တွင် တက်ရောက်အိပ်စက်လေသည်။
ခရီးပင်ပန်းလာသဖြင့် အိပ်စက်အနားယူအိပ်ပျော်ရန်ရှိလေသော် ဆရာကြီးဆုံးမ စာကိုသတိရလျှက် အိပ်မပျော်သွားရန် သတိနှင့်
နေလေသည်။ ညနက်ပိုင်းသို့ရောက်လေသော် ထိုဇရပ်အိုသို့ ၀င်ရောက်လာသူခရီးသွားမှန်သမျှအား ဖမ်းယူစားသောက်
လေ့ရှိသောဘီလူးမသည် ရောက်လာကာ ကိုသာဂေါင်အား သတ်ဖြတ်စားသောက်ရန်ပြုလေသည်။ ဆရာကြီးအမှာ စကားအတိုင်း
သတိနှင့်အိပ်သောကိုသာဂေါင်သည် ဘီလူးမအားဦးစွာဖမ်းချုပ်လျှက် ထုထောင်းလေသည်။ ဘီလူးမလည်း နာကျင်လွန်းသဖြင့်
သူ့ကို မသက်ရန်နှင့် လွှတ်ပေးပါက ရွှေသုံးပိသာ ပေးမည်ဟုတောင်းပန်လေသည်။
မိုးလင်းသော် ရွှေသုံးပိသာအား ထုပ်ပိုးလျှက် ခရီးဆက်လေသည်။ တစ်နေရာအရောက်တွင် လူအများ ပျော်ရွှင်မြူးတူးစွာ
ရေချိုးနေသည်ကိုတွေ့မြင်လေသည်။ ခရီးပန်းလာသဖြင့် စိတ်ရွှင်လန်းသွားအောင် ထိုနေရာသို့ဝင်ရောက်ရေချိုးရန်ပြုပြီးမှ ဆရာ့စကား
ကိုသတိရလျှက် လူများနှင့်ဝေးရာ သို့သွားကာတစ်ကိုယ်တည်း ရေချိုးလေသည်။ ရေချိုးခြင်းအမှုပြီးကာ ခရီးဆက်ပြီးလျှင်
အဝေးတစ်နေရာသို့ေ၇ာက်ပြီးကာမှ သူ့တွင် ရွှေသုံးပိသာထုပ်ပိုးထားသောအထုပ်မပါသည်ကို သတိရလေသည်။
ရေချိုးသည့်နေရာသို့ သွားရောက်ကြည့်ရှုရာ ရွှေထုပ်ကိုပြန်ရလေသည်။
သူ့ဇာတိရပ်ရွာသို့ ရွှေထုပ်ကြီးထမ်းကာဝင်ရောက်လာချိန်သည် မှောင်ရီပျိုးစအချိန်ဖြစ်လေသည်။ ဇနီးဖြစ်သူအား
ရွှေထုပ်ကြီးကိုဝမ်းသာအားရ အပ်နှံရန် အိမ်ပေါ်သို့ အသံမပြုဘဲ ၀င်လေသော် မထင်မှတ်ထားသောမြင်ကွင်းကိုမြင်တွေ့ရကာ
မြင်ရသောမြင်ကွင်းသည်ကား သူ့ဇနီးဘေးတွင် လူရွယ်တစ်ဦးသည် လဲလျှောင်းအိပ်စက်လို့နေသည်။
သက်ပြစ်ရန်ဆုံးဖြတ်လျှက် အိမ်အပြင်သို့ထွက်ကာ အသင့်တွေ့သောဓါးရှည်အားယူဆောင်ကာ အိမ်အတွင်းသို့
ယခုမှပင်သေချာတွေးကြည့်မိလေတော့သည်။ ကိုသာဂေါင် အ်ိမ်မှထွက်ခွါလျှက် စီးပွားရှာသွားသည်မှာ နှစ်အတန်ပင်
ကြာချေပြီဖြစ်သည်။ ကျန်ရစ်ခဲ့သော သားငယ်လေးသည် ယခုဆိုလျှင် ဆယ့်သုံးနှစ်ဆယ့်လေးနှစ်လောက်ရှိချေတော့မည်။
ဆုပ်ကိုင်ထားသော ဓါးအားဘေးသို့အသာချလျှက် ဇနီးနှင့်သားငယ်တို့အား နိုးစေပြီးလျှင် ပါလာသောရွှေထုပ်အားပြလေသည်။
ငွေအသပြာသုံးရာသာပေးချေခဲ့ရသော ဆရာကြီး၏ စကားကြီးသုံးခွန်းသည် သူ့နှင့်သူ့မိသားစုအတွက် အဖိုးမဖြတ်နိုင်အောင်ပင်
တန်ဖိုးရှိလေသည်ကို လက်ငင်းကြုံတွေ့သိမြင်ခဲ့ရချေပြီဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးတွင် မိသားစုသုံးယောက်မှာ ပူပင်ကြောင့်ကြ
"it is indeed"
virtual gtg producer reward: 389.360 VESTS Sep 18 '17
virtual tumutanzi curation reward: 1 VESTS for @steemitbc/steemit-blogger-c… Sep 18 '17
virtual paulag curation reward: 63.863 VESTS for @steemitbc/steemit-blogger-c… Sep 18 '17
virtual rt395 curation reward: 55.623 VESTS for @steemitbc/steemit-blogger-c… Sep 18 '17
virtual saturnme curation reward: 30.902 VESTS for @steemitbc/steemit-blogger-c… Sep 18 '17
virtual shadowspub curation reward: 24.721 VESTS for @steemitbc/steemit-blogger-c… Sep 18 '17
virtual the-traveller curation reward: 22.661 VESTS for @steemitbc/steemit-blogger-c… Sep 18 '17
virtual nickl curation reward: 14.421 VESTS for @steemitbc/steemit-blogger-c… Sep 18 '17
virtual centaurmystic curation reward: 12.361 VESTS for @steemitbc/steemit-blogger-c… Sep 18 '17
virtual stresskiller curation reward: 8.240 VESTS for @steemitbc/steemit-blogger-c… Sep 18 '17
virtual anaman curation reward: 6.180 VESTS for @steemitbc/steemit-blogger-c… Sep 18 '17
virtual bettykatty curation reward: 4.120 VESTS for @steemitbc/steemit-blogger-c… Sep 18 '17
virtual jpperc curation reward: 2.060 VESTS for @steemitbc/steemit-blogger-c… Sep 18 '17
virtual powerfj curation reward: 2.060 VESTS for @steemitbc/steemit-blogger-c… Sep 18 '17
virtual steem-dublin curation reward: 2.060 VESTS for @steemitbc/steemit-blogger-c… Sep 18 '17
virtual sarcastic.man curation reward: 2.060 VESTS for @steemitbc/steemit-blogger-c… Sep 18 '17
virtual inquiringtimes curation reward: 2.060 VESTS for @steemitbc/steemit-blogger-c… Sep 18 '17
virtual steemitbc author reward:0SBD,0STEEM and 5,144.095 VESTS for @steemitbc/steemit-blogger-central-s-new-s… Sep 18 '17
virtual theleapingkoala curation reward: 39.142 VESTS for @theleapingkoala/re-lyxng-re… Sep 18 '17
virtual lyxng curation reward: 4.120 VESTS for @theleapingkoala/re-lyxng-re… Sep 18 '17
virtual theleapingkoala author reward: 0.038 SBD,0STEEM and 72.104 VESTS for @theleapingkoala/re-lyxng-re-theleapingkoa… Sep 18 '17